Inqubo yokwenza umdlalo we-Chechens ukuthi insizwa inika intombazane intombazane. Uma evuma, unikeza umfana indandatho noma ishidi. Lo mculi usho ukuthi uhlala manje - ungumsikazi. Ngokusemandleni phambi kwezihlobo, umakoti nomkhwenyana bavumelana ngokuqokwa kosuku lomkhosi womshado. Ukuze uqale umshado, ohlala izinsuku ezintathu, khetha ngoLwesithathu, ngoMgqibelo noma ngeSonto, ngokuvamile emva kokuphela kokuhlwanyela noma ukuvuna. Imibhangqwana yaseChekchen iyisenzakalo esibalulekile empilweni yabantu abadlali abakhulu nabazali babo, kodwa wonke umzana. Imvume yokugcina yokuziphatha kwabo inikezwa abadala. Bayoqinisekisa ukuthi amasiko omshado waseCherchen, okuthiwa i-lovzar, ahlonishwa.
Kuphela kwemvume yabadala eyamukelwayo, ihhovisi elikhethekile lomshado liqala, elihlanganisa, njengokubusa, izihlobo nabangane abaseduze bomkhwenyana. Kumele bahlathulule kahle yonke indaba yomkhosi kumininingwane encane kakhulu. Imishado yaseCherchen yizibuko zangempela zemidlalo. Futhi zonke izindima kumele zibekwe ngaphambilini. Kuze kube yilabo abazohlala lapho nokuthi bayothini. Kudingekile ukuba ungacasuli noma yiziphi izivakashi futhi ugcine kahle amasiko.
Umshado waseCherchen, ngokwezifiso, uqala ngokuthi abangane bomkhwenyana bamthatha emzini wabobazali bakhe. Njengoba kwenzeka kaningi emasikweni wezinye izizwe, umakoti kudingeka athenge umakoti ngokugqoka ingubo yomshado emhlophe emnandi. Abangane bamkhokhela kuqala kulabo asebekhulile, abaqokwe abadala bendawo, endlini yomakoti. Isibalo salesi sihlengo-kalym sivunyelwane kusengaphambili. Khona-ke izintombi nezihlobo zomlobokazi zisalokhu zivimbela indlela yokubopha ngezintambo kuze zithole isihlengo.
Khona-ke umakoti uqhutshwa imoto ngokuya emzaneni kuya endlini yomyeni. Ukudlana kwemikhaya yaseCherchen sekuye kwamukelwa isikhathi eside ngezingqimba emoyeni.
Emphemeni umakoti ulindele umama wendoda yakhe yesikhathi esizayo enekomishi lamaswidi ezandleni zakhe. Kodwa ngaphambi kokuhlangana nomamazala wakhe wesikhathi esizayo, esinye isivivinyo silindele. Emkhawulweni wendlu yomkhwenyana umbhede ubhalwe ngokukhethekile (kwasekuqaleni kwe-burka) nomshanelo. Kukholelwa ukuthi uma umakoti esusa ngokucophelela lezi zinto eceleni - kuhlakaniphile. Uma nje uhamba phambili - kuyisiphukuphuku. Umama womkhwenyana uyaphatha futhi ameme umalokazana omusha endlini, ambonise ngamaswidi. Lapha intombazane ihlezi endaweni ehloniphekile futhi ingane yesilisa, njengombuso, owokuqala womunye wezivakashi ezihlonishwayo, iletwa. Kumele amthathe ezandleni zakhe futhi adlale naye. Lesi siko somshado waseCherchen yisifiso esingokomfanekiso sokuzalwa kwezingane ezinempilo, ikakhulukazi abafana.
Umkhosi uqala, lapho umyeni noma umakoti abahlanganyeli khona. Ngosuku lokuqala umkhwenyana uyaphuma endlini, ajabule nabangani bakhe. Umakoti usendlini yomkhwenyana, kodwa akufanele ahlale phansi ngalolu suku futhi akhulume kuqala nabangane nezihlobo zomkhwenyana. Imishado yaseCherchen, okokuqala, ayikho idili, kodwa imidanso yomshado. Yonke imikhosi ihambisana nomculo wabaculi abavakashi nezidanso zabavakashi. Wonke amaChekchen afunda ukudansa ngokushesha nje lapho eqala ukuhamba. Indoda engazi ukudansa ibhekwa njengeyiphutha futhi ngisho nakwezinga elithile liphutha. Imishado yaseCherchen, ngokuphathelene nesimo esinzima sokugcina, zama ukuqinisekisa ukuthi ukuphepha kwabo bonke abahlanganyeli kuphephile. Ukuqinisekisa ukuthi ayikho impi phakathi kwabantu abasha, isivakashi esihloniphekile, kanye nabasizi bakhe, amawashi.
Isiko lomshado waseCherchen sinezinsuku ezintathu. Ekuseni ngosuku lwesithathu, izivakashi zihola umakoti echibini. Ukuze athole amanzi, abangane bomkhwenyana baphonsa amaqebelengwane emanzini, bese bewadubula. Umakoti uqoqa amanzi futhi awubeke endlini - manje uvikelekile emanzini kuze kube phakade. Ukubhaliswa komshado kwenzeka kuphela ngosuku lwesithathu lomshado. Abashadayo bathola isimo somfazi nomama omncane.
Izimpawu nokukholelwa ezeni imali ukuheha ngemali
Indlela yokugcina i-zucchini: izinketho ezahlukene nezindlela